के छारे रोगको उपचार सम्भव छ ? - ज्ञानविज्ञान
नेपालमा भने एक प्रतिशत जनसंख्यामा यो रोग लागेको अनुमान छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर ६ करोड मानिसमा छारेरोग लागेको छ । छारेरोग लाग्यो भने धेरै वर्षसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
छारेरोग के हो ?
स्नायुसम्बन्धी एक प्रकारको बेहोस हुने समस्यालाई छारेरोग भनिन्छ । तर, सबै बेहोस हुने रोग छारेरोग होइन । दिमागको विकासक्रममा वा बनावटमा केही अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई पनि छारेरोग भन्न सकिन्छ । यो रोगलाई मृगी, चडिफाउ, फफडके, रिङ्ने आदि विभिन्न नाम पनि दिइएको छ । प्रायजसो कमजोर दिल भएका व्यक्तिलाई छारेरोगको सम्भावना बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
यो रोग धेरै प्रकारका हुन्छन् । यदि मानिसले बेहोसी अवस्थामा जिब्रो टोक्ने, आँखा पल्टाउने गर्छ भने त्यो कडा खालको छारेरोग हो । तर, कतिपय अवस्थामा छारेरोगको खास कारण थाहा नहुन सक्छ । मस्तिष्कमा हुने ट्युमर, इन्सेफलाइटिस, मेनेन्जाइटिस भयो भने पनि छारेरोग देखिन्छ । केही मानिसमा नुनको कमीले पनि यो रोगको लक्षण देखिन सक्छ । नुनको मात्रा पूरा भयो भने यो रोग आफैँ निको हुन्छ । यस्तो प्रकारको छारेरोग लाग्यो भने लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्दैन ।
छारेरोग एक दिमागी समस्या हो । यदि यो समस्याबाट पीडित रोगीले अचानक आँखा तिर्मिराउने र मन झस्किने संयोग भएमा एक्कासि मुच्र्छा भएर ढल्न पुग्छ । उत्तानो परिसकेपछि हातखुट्टा छटपटाउँछ । केही बेर हातखुट्टा छटपटाएर मुखबाट राल छोडेर करिब आधा घन्टासम्म रोगी बेहोस हुन्छ । यो समयमा रोगीलाई छोयो भने अरूलाई सर्न सक्छ भन्ने जनविश्वास पनि छ । करिब आधा घन्टापछि रोगीलाई होस आउँछ ।
उपचार के हो ?
छारेरोगको उपचार त्यसको प्रकार हेरेर गरिन्छ । साधारण किसिमको रोग बच्चाहरूमा छ भने २–३ वर्षसम्म औषधि दिएर निको पार्न सकिन्छ । यो रोग ७० देखि ८० प्रतिशत बिरामीलाई छोटो समयसम्म, ५ देखि १० प्रतिशतलाई लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा धेरै बिरामी उपचारबाट वञ्चित छन् । छारेरोगको शल्यक्रिया पनि गर्न सकिन्छ । धेरैजसो बिरामीका लागि औषधि नै उत्तम विकल्प हो । छारेरोगको लक्षण देखिएमा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उपचार गरे निको हुन्छ ।
Topics #उपचार #छारे रोग
Don't Miss it यस कारण पेटमा ग्यास भरिन्छ जनिराखौ
Up Next फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी, दूध र केरा सँगै खाँदा
संसारको जुनसुकै भूभागमा पनि पाईने यो वनस्पति हिन्दूहरूको लागि अत्यन्तै पुजनिय एवम उपयोगि वनस्पति हो | चिकित्सकहरूका अनुसार तुलसीमा सयौ…
पायल्सका बिरामीले के खाने ? थाहा पाउनुहोस
– हरियो सागपात काँचै खाने । – हरेक दिन शारीरिक व्यायाम गर्ने । – पायल्सका बिरामीले हप्तामा एकपटक वा आवश्यकताअनुसार…
यी सामान्य गल्तीहरुले सधै भान्सामा प्रयोग हुने तेल अस्वस्थकर हुन सक्छ
१. खुला मुख भएको भाँडोमा राख्दा भान्सामै तेल अस्वस्थकर हुन सक्छ । खाने तेल जहिले पनि साँघुरो मुख भएको भाँडोमा…
यी सात खानेकुराहरु शरिरलाई चाहिने भन्दा धेरै नखानुहोस्
१. पिनट बटरः पिनट बटरमा अत्याधिक मात्रामा फ्याट हुन्छ जसले एलर्जी हुन सक्छ र मानिसको स्वास्थमा असर गर्न सक्छ ।…
‘जति मीठो निद्रा उति लामाे आयु’ : कुन कुन उमेरकालाई कति निद्रा आवश्यक ?
यदि तपाईँ लामो र स्वस्थ जीवन चाहनुहुन्छ भने मीठो निद्रामा समय खर्च गर्नुहोस्,” निन्द्रा विशेषज्ञ म्याथ्यु वाकर भन्छन् । युनिभर्सिटी…
सुन्तलाको बोक्रा र महको प्रयोगबाट अनुहारको रौँ हटाउनुहोस
-सुन्तलाको बोक्रामा भिटामिन सी हुन्छ । जसले फ्री रेडिक्लससँग लड्ने काम गर्छ । परिणाम रौँ उम्रिने प्रक्रियामा ढिलाइ उत्पन्न हुन्छ…
कसरी दौडने बिहान ?
दौडने क्रममा आफ्नो पैतालाको चाल सुन्नुहोस् । यदि त्यो आवाज सुनिन्छ भने तपाईं जोडले दौडनुभएको बुझिन्छ । दौडँदा दिमागलाई एकाग्र…